Notendrena ho COMGEN i Richard « Bômba » : miaro tena mafy i tgv | Site officiel du collectif GTT Gasy Tia Tanindrazana
Notendrena ho COMGEN i Richard « Bômba » : miaro tena mafy i tgv
Araka ny tatitra mikasika ny filan-kevitry ny ministra androany 03 oktobra 2012 dia napetraka eo amin’ny toeran’ny kaomandin’ny zandarimariam-pirenena ny Jly Richard « Bômba » nasolo ny Jly Bruno Razafindrakoto. Ity farany izay fantatra tamin’ny fiarahany tamin’ireo rehetra nikonokonina ny fanonganam-panjakana ny taona 2009 dia nalefa ho « inspecteur général » ao amin’ny zandarimariam-pirenena ihany. Manomboka eto kosa izany dia tsy voafehin’ny resaka farim-piadidiana intsony ny Jly « Bômba » ary afaka hanampatra ny fahefany manerana ny Nosy mihitsy.
Raha tsiahivina tokoa dia fanta-daza amin’ny famadihana ny mpitandro filaminana ho hery famoretana ity mpanompon-dRajoelina ity ary mahafatra-po amin’ny fiarovana ny sezan’ny « patron »-ny. Isan’ireo mahery fihetsika amin’ny fanakanana ny fiverenan’ny Filoha RAVALOMANANA ihany koa ny tenany nandritra izay efa-taona latsaka nahalatsaka ny Firenena tao anaty krizy izay ary mbola tazominy hatramin’izao izany.
Mazava hoazy fa hanamafy ny fiarovana ny ftiondrana mpanongam-panjakana no isan’ny anton’ny nanomezana azy andraikitra lehibe toa izao ankoatra ny valin-kasasarana tamin’izay efa vita hatrizay. Fanodikodinan-dresaka ny filazana fa manelingelina an’Ambohitsorohitra ny fifandraisan’ny Jly Razafindrakoto sy Alain Ramaroson fa ny fanamafisana ny fiarovana an-dRajoelina no inoana fa tena marinaao ambadik’izao fanendrena izao. Tafiditra indrindra ao anatin’ny herinandro faramparany amin’ny 60 andro voafaritry ny fanapahan-kevitry ny SADC ihany koa izany ary inoana fa fiomanana sahady amin’ny fomba rehetra hanakanana ny fiverenan’ny Filoha RAVALOMANANA. Kilasin’ny FATE ho poizina mahery indrindra ho an’ny fibodoana fahefana ataony manko izany ka tsy maintsy atao izay hanakanana azy. Anjaran’ny Malagasy rehetra no mieritreritra sy mandinika ny manandrify azy tsirairay manomboka eto satria raha ny zava-mitranga dia efa azo itarafana fa tsy manana finiavana hanaiky ny hanatanterahana ny andininy faha-20 ao amin’ny tondro zotra velively i tgv sy ny forongony.
CONSEIL_DES_MINISTRES_031012.pdf 582.53 Ko